ရိုးမပေါ်မှာကျတဲ့မျက်ရည် – Pann Satt Lann Books
ကျောင်းဆရာဘဝကို မြတ်နိုးသူတစ်ဦး၏ ခက်ခက်ခဲခဲကြိုးပမ်းခဲ့ရသည့် ပညာရေးခယောင်းတောလမ်းမှ ပညာရေးလုပ်ငန်းနှင့် တပည့်များကြောင်းကို အတွေ့အကြုံအခြေခံရေးဖွဲ့ထားတဲ့ ရသဝတ္ထုစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
“ဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ ခံယူချက်၊ရပ်တည်ချက်၊ ကိုယ်ကျိုးမပါသော လုပ်ဆောင်ချက်များ နှင့် Background ခံရေးဖွဲ့ထားသော ဝတ္ထု၏ ရသခံစားကျည်ဆန်များနှင့် ကျွန်တော့်ကို တရာစပ်ပစ်ခပ်သွားခဲ့သည်။ စရိုက်ကြမ်းသော၊ အသိတရားကင်းမဲ့သော၊အရက်နှင့် ဘဝတစ်ခုလုံး နှစ်ထားသော၊ကလေးတွေကို ပညာသင်ပေးကောင်းမှန်းမသိသော၊ ကျောင်းထားပေးကောင်းမှန်းမသိသော၊ဆရာက ဆရာနှင့် မတူသော၊မိဘက မိဘနှင့်မတူသော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုးနှင့် ကလေးတွေရဲ့ဆရာကို မျက်နှာချင်းဆိုင်ပေးလိုက်သောအခါ ရိုးမပေါ်မှာကျတဲ့မျက်ရည် ဝတ္ထုဖြစ်လာသည်…” (ဆရာချိန်(ပဲခူး) အမှာစာမှ)
အဓိကဇာတ်ကောင် ဆရာတင်မောင်ဝင်း၏ ပညာရေးအပေါ်၊ ကလေးတွေအပေါ်၊ ကျေးရွာအပေါ်ထားသည့် ခံယူချက်သဘောထား၊မဟုတ်မခံ လောကဓံကိုအရှုံးအပေးပဲ အရည်အချင်းနှင့် လိုချင်တာ ဖြစ်ချင်တာကိုရအောင်တိုက်ယူခဲ့သူတစ်ဦး၏ ဘဝမုန်တိုင်း ပညာရေးဘဝဖြတ်သန်းမှုများကို လေးနက်သည့် ဇာတ်အိမ်အရေးအဖွဲ့များကြား တသသဖတ်ရှုရမည့် ဝတ္ထုကောင်းတစ်ပုဒ်လို့ ဆိုညွှန်းပါရစေ…
မောက္ခ၊ 2022 ဖေဖော်ဝါရီလ (တတိယအကြိမ်)
1.11.2021 နေ့မှစတင်၍ မူရင်းထုတ်ဝေတိုက်မှ ကျပ် ၆၀၀၀ စာအုပ်စျေးနှုန်းအသစ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ထားပါသည်။
ရိုးမပေါ်မှာကျတဲ့မျက်ရည် အား ဝေဖန်သုံးသပ်မှု4ရှိပါသည်။
Aung koko – November 13, 2019
Aung Kaung Htet – August 25, 2020
Brilliant. The story is good . I love the creativity of the writer . He chooses good words to express characters so the only thing that i want to say is BRILLIANT .
Kyaw Kyaw Tun – September 9, 2020
ဒီစာအုပ်လေးဟာ တကယ့်တကယ် ဖတ်သင့်တဲ့စာအုပ်လေးတစ်အုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်လို့ သိရပါတယ်။ ဘယ်သူတွေမိုက်မဲနေပါစေ ကိုယ်ရောက်ရှိတဲ့ ပတ်၀န်းကျင်တစ်ခုလုံး စရိုက်ဆိုးတွေဖြစ်နေပါစေ
ဘယ်သူတွေအကျင့်ပြတ်ပြတ် ကိုယ်မပြတ်ရဘူးဆိုတာ ဇာတ်ကောင် ဆရာတင်မောင်၀င်းက မီးမောင်းထိုးပြသွားပါတယ် (ဖတ်ရင်းနဲ့ လေးစားလိုက်တာ ရင်ထဲကြည်နူးနေမိတယ်) သူရဲ့ စိတ်ဓာတ်မြင့်မြတ်မှုတွေကို မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကျောင်းဆရာတစ်ယောက်လည်းဖြစ်နေတော့ ကျောင်းသားတွေအပေါ်ထားတဲ့ သူရဲ့စိတ်ထားသူရဲ့ စွန့်လွတ်အနစ်နာခံမှုတွေက တကယ်ကို လက်ဖျားခါမိလောက်အောင် လေးစားပီတိဖြစ်မိပါတယ်။
အမှန်တရားအတွက်ဆို ပြောရဲတဲ့ သူရဲ့သတ္တိ၊ ဘက်မလိုက်တတ်၊ လက်စားမှုကိုရွံမုန်း၊ ကိုယ်ကျိုးမငဲ့သူရဲ့စိတ်ထားမျိုးဟာ ဆရာကောင်းတစ်ယောက်က ဘယ်လိုမျိုးလည်း ပြောနေတာထက် ဒီဖြစ်ရပ်မှန်၀တ္ထုကို ဖတ်လိုက်မှ ပိုပြီးနားလည်လာမယ် ခံစားတက်လာမယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး ရပ်ရွာ ရပ်မိရပ်ဖပညာရေးဆို စိတ်မ၀င်စား၊ ပညာရေးကိုအားမပေးတတ် အကျင့်ပြတ် မင်းမှုစရိုက်တွေရှိတဲ့နေရာကို သူ့ရဲ့ စစ်မှန်သောမေတ္တာတရား၊ ဥာဏ်ပညာကြီးမားမှု၊ သူရဲ့ကြိုးစားမှုတွေနဲ့ကောင်းမွန်သော လူ့အဖွဲ့အစည်း နေရပ်ဒေသဖြစ်အောင် အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့တာ ပေါ်လွန်ပါတယ်။
ကိုယ်ကျင့်တရားမှာ ပြောစရာမလို ကောင်းတယ် မူးရစ်ဆေးနဲနဲလေးတောင် သူအသုံးမပြု၊ စေတနာထားတတ်လွန်းတဲ့ သူရဲ့စိတ်၊ ပြောသင့်တဲ့စကားဆို ရဲရဲ၀င့်၀င့်ပြောတယ်။ ဒါတင်မကပါဘူး ဒီ၀တ္ထုဟာ လူ့သဘောသဘာ၀တွေ အများကြီးတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ လမ်းမှားရောက်နေတဲ့ ကျောင်းဆရာအချင်းချင်းကို လမ်းမှန်ရောက်အောင် သူကြိုးစားဆွဲခေါ်ခဲ့တယ်။ တာ၀န်ယူမှု/ တာ၀န်ခံမှုအပြည့်ရှိတဲ့ ယောကျာ်းကောင်းတစ်ယောက်လို့လည်း မြင်မိပါတယ်။ ဆရာကောင်းတစ်ယောက်ဆိုလည်း မမှားပြန်ပါဘူး။ ဇာတ်ကောင် ဆရာတင်မောင်၀င်း တာ၀န်ကျရာဒေသမှာ သူနေခဲ့တဲ့ 2/3 နှစ်အတွင်း သူ့အတွေ့အကြုံဖြစ်ရပ်မှန်တွေ ၀တ္ထုမှာ တွေ့မြင်နိုင်တယ်။ ဒီ၀တ္ထုရှည်ကတော့ ရင်ထဲမှာ ပြန်စဥ်စားမိတိုင်း ဇာတ်ကောင်ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကို အားကျမိနေဆဲပါ။ ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြည့်ပါ။ စေတနာအရင်းခံဖြင့် တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
Hnin Wutyi Kyaw – November 21, 2020
ညီမအနေနဲ့ ဒီစာအုပ်လေးဟာ အတော်ကောင်းတဲ့စာအုပ်လေးတစ်အုပ်လို့ ညွှန်းပါရစေရှင့်….
ကျောင်းဆရာတွေရဲ့ ဘဝဟာ ဖယောင်းတိုင်လိုပါပဲ
ကိုယ်တိုင်အလောင်ခံပြီးမှ ဘေးက လူတွေအတွက်အလင်းပေး တာပါ… ဒါကြောင့် ဒီစာအုပ်လေးဟာ
ရိုးမပေါ်မှာကျတဲ့ မျက်ရည်ဆိုသလိုပဲ ရိုးမ ပေါ်မှာကျခဲ့တဲ့
ကျောင်းဆရာ တစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝကို ဖတ်ကြည့်ကြည့်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းရင်း……
သုညမှ…သုခသို့ (မရှိခြင်းဖြင့် ချမ်းသာခြင်း)
အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးနေသူများနှင့် ဗိုက်အငှားလိုက်သူတစ်ဦး၏ဘ၀
ရာစု၏သမီးပျို နှစ် ၁၀၀ တက္ကသိုလ်